China Metal part design mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Ny famolavolana ny metaly dia misy ny famaritana ny endrika endrika, ny refy, ny fahamendrehana ambonimbony ary ny fananana mekanika feno, ary farany dia mivoaka sary amin'ny famokarana ampahany farany.
Ny faritra vy dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany. Ny famolavolana ny vy dia loharanon'ny fiainana vy. Mestech dia manome ny karazana fanodinana vy, karazana fanodinana ary fanodinana fitaovana ho an'ny fitaovam-pifandraisana, fitaovana elektrika ary fitaovana elektronika.
Ny fananana ara-batana sy simika, ny habeny, ny bika, ny tontolo iainana ampiasaina ary ny fampiharana ny faritra metaly isan-karazany dia mirakitra sy miovaova avokoa, ary ny teknolojia fanodinany dia be dia be koa.
Mba hanaovana asa tsara amin'ny famolavolana ny vy, misy zavatra manan-danja telo tsy maintsy hazavaintsika.
1.ny tontolon'ny fampiasana ny faritra sy ny takiana amin'ireo ampahany
(1). Fepetra takiana
(2). Fepetra takiana
(3). Fahamarinana ambonin'ny
(4). Fepetra fanoherana ny harafesina
(5). Fepetra takiana
(6). Fepetra takiana
(7). Fepetra takiana amin'ny herinaratra sy hafanana
(8). Fepetra takiana amin'ny lanja
(9). Fepetra takiana
Injeniera dia mamolavola
2. Safidio tsara ireo fitaovana mety
Ireto ny fitsipiky ny fisafidianana fitaovana amin'ny famolavolana faritra vy:
(1). mahafeno ny fahombiazan'ny fampiasana: ny fitaovana dia tsy maintsy afaka mameno ny fepetra takiana amin'ny tanjaka, hamafiny, hamafiny, fitarihana ary mari-pamantarana hafa.
(2) Fahombiazan'ny fanodinana tsara: mora ny manodina sy mamokatra marimaritra iraisana, hahazoana antoka ny tahan'ny fandalovana avo lenta, ary hahafeno ny fepetra takian'ny famaritana ny refy sy ny fahombiazan'ny refy.
(3) Toekarena: afaka mahatsapa famokarana marobe miaraka amin'ny vidiny mirary izy io.
Mitondra zana-kazo sy fitondra-tany lemaka
Raha jerena ny fepetra takiana amin'ny teknolojia fanodinana ny ampahany, izany hoe ny famolavolana ny faritra dia tokony handinika ny teknolojia fanodinana mifandraika amin'izany mba hahazoana antoka ny fahombiazana takiana sy ny marina, ny fomba hampihenana ny fahasahiranana amin'ny fikirakirana, ny vidiny ary ny fanatsarana ny vokatra.
(1) milina: ho an'ny faritra manana toetra mekanika henjana (tanjaka, hamaf) ary ny fahamendrehana sy ny fahamendrehana, toy ny fitaovana, ny crankshafts, ny bearings ary ny faritra fandefasana hafa ho an'ny fitaovan'ny milina na ny milina fananganana, alimo vy na varahina dia matetika no voafantina. Ny fomba fanapahana dia fanapahana mekanika.
(2). nohitsakitsahana: ho an'ny faritra lovia manify, toy ny kaontenera, akorandriaka, lampozy na faritra misy takelaka, metaly na fitombohana dia ampiasaina matetika. Ny fahamendrehan'ity haitao fanodinana ity dia ambany noho ny fanapahana, noho izany dia mila milina ireo faritra sasany manana ny fepetra takiana.
(3) Fanariana maty: ho an'ny faritra sasany misy endrika sarotra, ampahany vy tsy ferrous indrindra, toy ny akorandriaka maotera, radiatera ary fitoeran-jiro vita amin'ny firaka aliminioma, firaka zinc, firaka magnesium ary firaka varahina, mamono tena dia afaka mamonjy ny manapaka vola ary mahazo tahan'ny famokarana avo. Mety amin'ny famokarana betsaka.
(4) Teknolojia fanodinana hafa: ny fitrandrahana vy dia mety amin'ny famokarana betsaka ny mombamomba ny vy miaraka amina fizarana tsy tapaka, ary ampiasaina amin'ny famokarana faobe ny vy vy ny ampahany.
Mestech dia manome ny mpanjifa famolavolana OEM sy fanodinana ireo faritra vy. Raha misy mila na mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa aminay.
Previous: Famolavolana vokatra plastika
Manaraka: Lasitra nohomboana tamin'ny vy
Lasitra nohomboana tamin'ny vy
Famolavolana tsindrona ampahany amin'ny nylon
Horonantsary plastika fanodinkodinam-baravarana anaty horonan-tsary